stonesoflife: CyanogenMod 10 based Android 4.1 Jelly Bean ကို Galaxy Tab 8.9 (model numbers P7300/P7310 only) မှာ install လုပ်နည်း
CyanogenMod 10 based Android 4.1 Jelly Bean ကို Galaxy Tab 8.9 (model numbers P7300/P7310 only) မှာ install လုပ်နည်း
Step 1: Backup your important data.
Step 2: ClockworkMod recovery install မလုပ်ရသေးပါကလုပ်ပါ။
Step 3: Download CM10 ROM
for P7300 http://www.mediafire.com/?4oyh5d27gfqkvx3
for P7310 http://www.mediafire.com/?mmthnb2fwoc4mb5
Step 4: Download Google Apps package http://108.166.171.36/goodata/74e015fe8593ece5149af60f680088bd/5013d4b1/gapps/gapps-jb-20120726-signed.zip
Step 5: Download လုပ်ထားတဲ့ zip file ၂ ဖိုင်ကို SD card ထဲထည့်ပါ။
Step 6: Tablet ကို power ပိတ်ပါ။ Then boot into ClockworkMod recovery withabutton sequence. (အသံလျှော့ခလုတ်+ power buttons) ကိုတွဲနှိပ်ပါ။ screen ပေါ်မှာ icon ၂ ခုပေါ်လာတဲ့အထိနှိပ်ထားပါ။ ပြီးရင် ဒုတိယမြောက် icon ဖြစ်တဲ့ recovery icon ကိုရွေးပါ။
Step 7: Wipe data/factory reset ကိုရွေးပြီး Yes ကိုနှိပ်ပါ။ Data wipe process ပြီးတဲ့အထိစောင့်ပါ။
Step 8: Choose install zip from sdcard ကိုရွေးပါ။ Download ဆွဲပြီး SD card ထဲထည့်ထားခဲ့တဲ့ ROM file ကိုရွေးပါ။ Yes ကိုနှိပ်ပါ။ ROM ကိုစတင် install လုပ်ပါပြီ။
Step 9: ROM installation ပြီးရင် choose zip from sdcard ကိုထပ်ရွေးပါ။ kernel file ကိုရွေးပါ။
Step 10: Kernel installation ပြီးသွားရင် choose zip from sdcard ကိုထပ်ရွေးပါ။ ဒီတစ်ခါ gapps-jb-20120717-signed.zip file ကိုရွေးပါ။
Step 11: Google Package ကို install လုပ်ပြီးသွားရင် back ပြန်လုပ်ပြီး reboot system now to reboot the tablet ကိုနှိပ်ပါ။ boot လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ၅ မိနစ်လောက်ကြာတတ်ပါတယ်။ ပြန်တက်လာရင် installation ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Htar Htar Lwin at 5:01 AM
Labels: Programming Languages, Version Upgrade, Verstion Upgrade
Samsung Galaxy Mini GT-S5570 အတွက်firmware upgrade turotial လေးကို link လေးတွေနဲ့ တကွတင်ပေးစေချင်ပါတယ်၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
La Min August 25, 2012 at 1:58 PM
La Min August 25, 2012 at 2:02 PM
Samsung Galaxy Tab GT-P1000 Jelly Bean ကိုဘယ်လို Upgrade လုပ်ရမလဲဆိုတာလေး
ကျွန်တော်ရှာတာ တော်တော်နှံ့ နေပြီ။
"CyanogenMod 10" Link ထဲမှာလဲမတွေ့ ဘူး။
သြော် ... ဒါနဲ့ ။
LG Optimus Me P350 အတွက်ပါပြောပေးပါနော်။
အမြင့်ဆုံး မြှင့်လို့ရသလောက်လေးပေါ့။